Akhriso warbixin ku saabsan duqeymaha diyaaradaha Kenya ee Koonfurta Soomaaliya - Somalia Focus
Akhriso warbixin ku saabsan duqeymaha diyaaradaha Kenya ee Koonfurta Soomaaliya
by Hassan Ali | Sunday, Mar 5, 2017 | 237 views
5,March,2017(SofoNews) Haayada Xuquuqul Insaanka Fanole Human Rights Organization. Oo Walaac ka muujisay Duqaymaha Diyaaradaha dalka Kenya ay ka Geysanayaan gobalka Xuduuda ku yaalla ee Gedo.
Tacdiga diyaaradaha kenya ee dhinaca cirka ayaa sababay dhimashada iyo dhawaaca dad aad u fara badan waxaana haayada Faanole Human Rights ay diwaan galisay Tiradii ugu badnayd ee dad wax yeelo ka soo gartay duqaymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya.
DHibanayaashii ugu badnaa ee ay waxyeelada ka soo gaartay duqaymaha ayaa waxaa ay u badan dadka reer guuraaga ama reer miyiga ah
ee ku nool Galbeedka gobalka gedo ee koonfurta somaaliya. haayada xaquuqul insaanka Faanole waxaa bishii fabaraayo ay diwaan galisay
dhibanyaashii ugu badnaa ee ay waxyeelo ka soo gaartay duqaymaha,kuwasoo ka koobnaa ,Haween,Caruur, iyo Dad da,ah. oo dhamaandood ahaa
Dad xoola dhaqato ah .bishii marso 2016 waxaa gantaal ay tuureen diyaaradaha dagaal kenya ku dhintay sagaal qof oo afar ka mid ah ay ahaayeen dad isku hayb ah ,
Waxaa sidoo kale ku dhaawamay laba iyo toban Ruux oo ku sugnaa goobta uu gantaalka ku soo dhacay oo ahayd goob xoolaha ay biyo ka cabaan oo u dhow deegaanka
ceelcade ee bartamaha gobalka gedo ee k u dhow xuduuda ay wadaagan somaaliya iyo kenya.
deegaanada diyaaradaha ay duqeeyeen waxaa ka mid ah likooley,war gaduuda,ceelcade,tarako,faafax dhuun,dhamaso,qadiijo xaaji, iyo tuulo barwaaqo.
DHowrkii bilood ee ugu danbeysay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban .gaar ahaan novemberiyo december . waxaa diyaaradah ay duqeeyen ceel biyaha laga cabo oo u dhow.
deegaanka ceel gaduud oo Qiyaastii dhinaca galbeed 50km Kaga beegan magaalada garbahaarey ee Xarunta Gobalka Gedo.
Duqaymaha november/december waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya ilaa todobo iyo toban ruux oo kuwasoo ay ku jiraan caruur da,dooda ay ka yar tahay shan sanno.
Sidoo Kale Waxaa ku naf waayay tiro xoola ah, oo ka kooban geel ,lo, iyo ari.
Tirada xoolaha ee lagu laayay duqamaha waxaa lagu qiyaasay ilaa afar kun iyo todoba boqol oo neef.[4700,000.]
dhinaca kale janaayo 2017 waxaa diyaaradaha dalka kenya ay laba jibaareen duqaymaha ay ka geysanayaan dhulka miyiga ah ee loo yaqaano daawo ee ku yaalla dhinaca Waqooyi ee gobalka gedo.
Haayada faanole ayaa waqti xaadirkaan waxaa walaac ay ka muujinaysaa xaaladaha duqaymaha ee ka sii soconaya gobalka xuduudaha ku yaala ee Gedo. Waxaana Dowlada somaaliya iyo Qaramada midoobay ay ka codsanaysaa in ay ka qayb qaataan xal u helida arimahaasi. Islamarkaana dowlada Kenya laga hadlo sidii ay u joojin lahayd duqaymaha noocaasi oo kale ah.
Xafiiska haayada fanole human rights ee jubaland isagoo ee gaya marxalada lagu jiro. Iyo wacyiga ka jira gobalka geeska afrika waxaa uu ka gaabsaday in uu soo bandhigo magacayada dhibanayaasha iyo cadaymo kale oo muujinaya dhibaatooyinka ka dhashay duqaymaha la beegsaday dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan eek u sugan nawaaxiga deegaanada ku dhow dhow xuduuda ay wadaagan somaaliya iyo Kenya.
Guddoomiyaha hay’adda Faanoole Karar Aadan Rukow ayaa u mahad celinaya dhamaan shaqsiyaadkii
ka qayb qaatay xog ururinta ku saabsan tacdiga la xiriira arimaha
bina,aadanimada. Gaar ahaan howl wadeenadii iyo goob joogayashii
waqtigooda qaaliga u huray ka qayb qaadashada
soo bandhigida xogtaan muhiimka ah.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo ku mashquulsan dhismaha wasiiradiisa
Madaxweyne Farmaajo oo shir isugu yeerey warbaahinta